Nagu saabsan - Dongguan Tuoyuan qiray Makiinado Co. LTD
Hoyga > Nagu saabsan >
Dongguan Tuoyuan qiray Makiinado Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2016 waxayna dhaaftay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001. Laga soo bilaabo 2016, waxay ku hawlanayd adeegyo wax-soo-saar hal-joogsi ah (alxanka xarkaha, samaynta xaashida birta ah, buufinta iyo farsamaynta CNC).
Shirkaddu waxay daboolaysaa aag guud oo ah 5,000 mitir murabac, oo leh raasamaal diiwaangashan oo ah 10 milyan yuan iyo wadarta shaqaalaha 60. Aqoon-isweydaarsiga ugu horreeya wuxuu ku yaalaa No. 101, Taixin Road East, Bulshada Xinguyong, Degmada Wanjiang, Magaalada Dongguan. Waxay inta badan ku hawlan tahay farsamaynta iyo isku-dhafka qaybaha saxda ah ee qalabka otomaatiga aan caadiga ahayn, iyo sidoo kale naqshadeynta iyo soo-saarista qalabka isku-xidhka.
Aqoon isweydaarsiga labaad wuxuu ku yaalaa Xiaohe Village, Daojiao Town, Dongguan City. Waxay inta badan ka shaqeysaa sariirta mashiinka goynta leysarka, saxanka hoose ee qalabka waaweyn, saxanka nalka, saxanka derbiga iyo jirkiisa, caajis, shiidida iyo shiidida, iwm. Waxaa jira 45 shaqaale wax soo saar ah, 6 maareeyayaal, 5 injineero ah iyo 4 kormeerayaal tayo leh.
Qalabka ugu muhiimsan waa xarunta makiinada CNC: leexashada, leexashada, shiida, shiidaada, iwm.